बाख्रा पालन कसरी गर्ने ? थोरै समय निकालेर पढनुहोस् ! - Manaslu Post
कृषि सम्बन्धी जानकारी मुलक डकुमेँट्री हेर्नको लागी आजै MANASLU TV मा subscribers गर्नुहोला । छिट्टै प्रशारण हुर्दैछ ।
मनास्लु पोष्ट १ असार २०७५, शुक्रबार २०:५५ 4970 पटक हेरिएको
कति सम्म बाख्रा खोरमा राख्ने :
कति सम्म बाख्रा राख्न सकिने भन्ने कुरा कसरी व्यवस्थापन गरिन्छ भन्ने कुरामा भर पर्छ। यदि अन्तराष्ट्रिय बाख्रापालनको मापदण्डलाई मान्ने हो भने प्रति १५ बाख्रा ९०० वर्गफिटको जमिनको आवश्यकता पर्दछ। तर उक्त प्रकारको क्षेत्रफल बाख्राको लागि छुट्ट्याउदा गाँउघरको लागि बाख्रा पालन निकै महँगो पर्न जान्छ। हाम्रो गाँउघरमा ५ह५ फिटको हाराहारीको खोरमा ७-८ वटा सम्म बाख्रा पालेको देखिन्छ।
खोर कस्तो बनाउने :
खोर बनाउदा बाख्रा बस्ने टाँड जमिन भन्दा कम्तिमा ९० सेन्टीमिटर अग्लो स्थानमा बनाउनु पर्दछ। यसरी खोर बनाउदा बाख्राको बड्कौला (दिसा) र पिसाव बाट आउने गन्ध पुरै खोर भित्र आउदैन। ध्यान पुर्याउन पर्ने कुरा के छ भने दिसारपिसाव कुहिदा निस्किने ग्याँसहरू (सल्फर डाईअक्साईड, मिथेन, एमोनिया, हाईड्रोजन सल्फाईड आदि) ले साना-साना पाठापाठीको वृद्धि विकासमा फरक पार्नुको साथसाथै गर्भवती बाख्रालाई तुहाईदिन कस्छ।
बाख्राको खोर जमिनबाट केहि अग्लो कम्तिमा ९० सेन्टीमिटर बनाउदा दैनिक वा समय समयमा सफा गर्न सकिन्छ जस्ले गर्दा मलमुत्र कुहिएर गन्हाउने तथा हानिकारक ग्यासहरू निस्किने प्रभावहरू न्यूनिकरण गर्न सकिन्छ।
बाख्रा पालन गर्ने किसानले यदि आफैले बोका राख्ने हो भने बोकालाई छुट्टै राख्नु पर्दछ। यदि त्यसरी राख्न सकिएन भने बाख्रामा हाडनाताको सम्बन्ध रहनजाने सम्भावना हुन्छ।
गर्भवती बाख्रालाई सकेसम्म छुट्टै राख्ने र राख्न नसक्ने अवस्थामा अरू बाख्राले हान्न नसक्ने अवस्था मिलाएर राख्ने।
बोका कस्तो लगाउने र कुन बेला लगाउने :
बोका लगाउदा आफ्नो खोरमा भएका बाख्रा संग कम्तिमा ६ पुस्ता संग नाता नपर्ने (मान्छेको जस्तै, र मामारफुपुका चेला-चेली समेत पार्न नहुने) बोका पुर्ण स्वस्थ छ भने मात्र प्रयोग गर्ने।
बोका ९ महिना पुगेपछि मात्र प्रयोग गर्ने। यदि ९ महिना पुगेको छैन भने कम्तिमा ६ महिना पुगेकै हुनु पर्छ।
६ वा ९ महिना पुगेको बोका पनि राम्रो संग बढेको छैन भने प्रयोग गर्दै नगर्ने।
सिफारिस अनुसार ३० वटा पाठीहरूलाई एक बोका पर्याप्त छ भन्ने देखिन्छ। पाल्पामा गरिएको अनुभवमा १० माउ बरावर एक बोकाको आवश्यकता पर्दछ।
बाख्राले बोका खोज्ने समयमा बोकालाई विशेष खानपिनमा ध्यान पुर्याउनु पर्दछ। यदि गाँउमा सेवाको लागि बोका पालन गरिएको छ भने बोकालाई दैनिक खुराकमा प्रोटिनको मात्रा बढाएर दिने (जस्तैस् भट्मास, भट्मासको मस्यौरा, गेडागुडी र सम्भव भए सम्म थोरै मात्रामा तेल र अण्डा)।
बाख्राले बोका खोजेको कम्तिमा ३ घण्टा पछि पहिलो पटक र ६ घण्टा पछि दोस्रो पटक बोका लगाउदा बाख्रा गर्भवती हुने सम्भावना ९९५ सम्म हुन्छ। बोका लगाउदा बोकालाई एकपटक लगाउदा कम्तिमा ३ पटक सम्म बाख्रालाई चढ्न दिनु पर्दछ।
बाख्रालाई कुन समयमा बोका लगाउने :
गाँउघरमा सामान्यतया ४ देखि ६ महिनाको उमेरमा पाठीहरूलाई बोका लगाउने चलन हो। ४ देखि ६ महिनाको पाठीलाई बोका लगाउनु भनेको १३-१६ वर्षकी युवतीहरू गर्भवती भए बरावर नै हो। भन्नुको मतलव उक्त उमेरमा पाठीहरू शारिरिक रूपले परिपक्क भएका हुदैनन्। यस्तो बेलामा पाठी गर्भवती भएमा सानो पाठा-पाठी जन्माउने, जन्माउन समस्या हुने, पाठा-पाठी तुहिने र झण्डै ३०५ अवस्थामा माउ मर्ने सम्मको अवस्था देखिएको छ।